Ion ikhadi ezikhanyisayo credit | ezifana senzalo ikhomishana ukubala, imininingwane service
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ion ikhadi ezikhanyisayo credit | ezifana senzalo ikhomishana ukubala, imininingwane service
Imali yonyaka mahhala, kwakungeke kube nabaningi ucabangela isicelo "ikhadi ion" ukuthi etholwe amadili amasevisi ezihlukahlukene ion esitolo ngamunye.
e udumo yelangabi ephenduphendukayo ezintathu izinhlobo zokukhokha kukhona ion ikhadi inkambo
, futhi kukhona izinhlobo ezintathu ukukhetha inani sokukhokhwa nyangazonke "Inkambo ? B Yiqiniso ? C Course".
Uma ibhalansi kuze Usuku lokuvala 100,000 yen noma ngaphansi, 5,000 yen nyangazonke ukubuyiswa kwemali imali e A Yiqiniso, 7,500 yen B Yiqiniso, ngokuhamba C bebelokhu 10,000 yen. Nokho, uma ibhalansi ingaphezu 100,000 yen, ngoba inani ukubuyiswa kwemali of course ngayinye ihlukile, ake qaphela. Ngo-credit yelangabi ephenduphendukayo
ion ikhadi, ucacise izifundo ngenhla isicelo esiteji. Ngemva, lapho ikhadi yezitolo, ungasebenzisa indlela yokukhokha ku kuphela ukudlulisela "e ezikhanyisayo credit."
I ezikhanyisayo Ikhredithi ion ikhadi imisebenzi emithathu
ion ikhadi, kukhona imisebenzi emithathu ukuthi "ribonucleic ushintsho inkonzo ? ATM ezikhanyisayo credit isevisi yokukhokha ezikhanyisayo credit izinkokhelo anda service". "Ribonucleic ushintsho isevisi" iyisevisi ukuthi ungakwazi ukushintsha lokukhokha esasetshenziswa njengesamba semali e ezikhanyisayo credit, ungakwazi ukusebenza ngokushesha kusukela indawo esemthethweni ikhadi ion.
"ATM ezikhanyisayo credit lokukhokha service" iyisevisi ukuthi bangakwazi ukukhokha imali esele ye ezikhanyisayo credit lemali noma kunini kusuka ATM tie-up. Ngo-credit ezikhanyisayo, ukuze kuncishiswe ibhalansi ekuqaleni kuzoholela ukonga omyalo, lesi sici ngempumelelo uma ufuna ukunciphisa imali by kakhulu ngendlela ikhomishana kungenzeka.
Esikhathini "ezijikelezayo credit izinkokhelo anda service", 1 ukukhokhwa nyangazonke, Ungakwazi ukwandisa 000 yen. Kuyinto kulabo abafuna ukwenza nanembuyiselo uhlelo kangcono futhi zikanokusho ufuna ukunciphisa imali. Izinqubo ngaphezu iphuzu contact, singakwazi manje kusukela indawo esemthethweni ikhadi ion.
ukuze uhlola kanjani futhi nini usebenzisa Amanothi
ezikhanyisayo credit walo myalo, kuzothatha imali enqunyiwe. Kunjalo yekhadi ion, ezikhanyisayo credit izimali ion ikhadi isibe "eningi inani lenzalo yonyaka amaphesenti 15.0 ka."
Ngokwesibonelo, uma uthenga i-intela 100,000 yen Inkambo ngo-October 11, imali izobalwa ngu formula "100,000 × 15% ÷ izinsuku ezingu-365 × izinsuku 23 = 945 yen". Ngoba izinsuku 23 inani lezinsuku kusukela Okthoba 11 kuya ku-November 2. Ngamanye amazwi, lo ukudonswa kwemali ka 2 Novemba kuyoba kufakwe 5,945 Imali yen.
uma ufuna kalula inani wenkokhelo, cabangela ukusetshenziswa "ezijikelezayo credit ukubuyiswa kwemali sekulingisa" okungukuthi kusayithi esemthethweni ikhadi ion. Ngokufaka imali esele yamanje ngokukhetha Yiqiniso lisetshenziswa, lizovezwa ngokushesha elilandelayo okukhokha e nezindleko akufakiwe.